News of Nepal | Atlante - notizie da tutto il mondo in tempo realeelingua originale
Nepal Samacharpatra, Kamana, Sadhana, Mahanagar
Aggiornato:3giorni 11 ore fa
काठमाडौंमा भिख माग्न निषेध, यस्तो छ कमपाको सूचना
Ven, 01/07/2022 - 6:04am
काठमाडौं महानगरपालिकाले अबदेखि सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा माग्न निषेध गरेको छ। शुक्रबार महानगरले एक सूचना जारी गर्दै महानगरको सडक, सार्वजनिक स्थल, गल्ली, पार्क, सरकारी कार्यालयको वरिपरि, बस बिसौनी र सवारीसाधनमा बसेर भिख माग्‍न नपाइने बताएको हो।
‘महानगरपालिका क्षेत्र भित्रको सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनी स्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालयको परिसर, सार्वजनिक सवारीसाधन र अन्य सार्वजनिक स्थानमा कसैले भिक्षा माग्न वा बालबालिकालाई गीत गाउने, नाच्ने, खेल्ने वा कुनै काम गर्ने बहानामा वा अन्य व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको रकम वा ज्याला दिई भिक्षा माग्न वा माग्न दुरुत्साहन नगर्न तथा नगराउन काठमाडौँ महानगरपालिका नगर सभा ११औँ अधिवेशनबाट स्वीकृत नीति समेतका आधारमा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ’, सूचनामा भनिएको छ।
सूचनामा साधु, सन्त, जोगी वा भिक्षुले सनातनदेखि चलिआएको परम्परा अनुसार घर घरमा पुगी भिक्षा माग गरेमा वा कुनै धार्मिक वा सांस्कृतिक कार्यमा कुनै रोक नलगाइएको जनाएको छ।
Ven, 01/07/2022 - 5:54am
भोलोदिमिर जेलेन्स्की युक्रेनमै जन्मे । उनका पिता पनि युक्रेनमै जन्मेका थिए तर यहुदी मूलका थिए । अमेरिका युक्रेनमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन एकजना उपयुक्त पात्रको खोजीमा थियो । अमेरिकाले सबैभन्दा उपयुक्त पात्रको रुपमा जेलेन्स्कीलाई नै देख्यो । जेलेन्स्कीलाई नै रोज्नु कुनै आश्चर्यको विषय पनि थिएन, किनकि विश्व राजनीतिलाई नियालेर हेर्ने हो भने अमेरिकाप्रति सबैभन्दा बफादार र घनिष्ट सम्बन्ध राख्न यहुदीहरु नै पूर्णरुपमा सफल देखिन्छन् ।
युक्रेनको राष्ट्रपति हुनुपूर्व जेलेन्स्की चलचित्र र टेलिभिजन दुनियाँका एक लोकप्रिय र सफल हास्य कलाकार (नायक) थिए । उनका चलचित्रहरुमा प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा अमेरिकाको हलिउडका प्राविधिकहरुको संलग्नता हुन्थ्यो । एक दिन यस्तो आयो कि उनी एउटा यस्तो टेलिभिजन शृङ्खलामा अनुबन्धित भए जसको नाम थियो ‘सर्भेन्ट अफ द पिपोल’ । उक्त टेलिशृङ्खलामा उनी एक साधारण शिक्षकबाट राष्ट्रको राष्ट्रपति बनेको देखाइन्छ र देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार एवं कुशासनको अन्त्य गर्ने अभियानमा लागेको देखाइन्छ ।
यो टेलिशृङ्खलालाई सुनियोजित ढंगले अति लोकप्रिय बनाइन्छ, ठ्याक्कै भारतीय चलचित्र ‘नायक’ का हिरो अनिल कपुरजस्तै गरी । युक्रेनमा यस्तो वातावरण सृजना गराइन्छ कि जेलेन्स्की नै सच्चा देशभक्त हुन्, उनले मात्र युक्रेनलाई भ्रष्टाचार र कुशासनबाट मुक्त बनाउन सक्छन् । यसरी उनको व्यापक प्रचारप्रसार गराइन्छ । युक्रेनका प्रमुख मिडियाहरु र बुद्धिजीवीहरुमाथि अमेरिकाको डलरको वर्षा हुन थाल्छ । फेसबुक, ट्विटर, वाट्स एप, टिकटक सबैमा जेलेन्स्की मात्र सबैभन्दा उपयुक्त देखाइन्छ मुलुकको राष्ट्रपतिका निम्ति । जेलेन्स्कीलाई युक्रेनको राष्ट्रपतीय चुनावमा उम्मेदवार बनाइन्छ ।
भ्रष्टाचार र कुशासनबाट आक्रान्त युक्रेनका सीधासाधा जनता मिडिया प्रोपागान्डा र पब्लिसिटी स्टन्टको सिकार बन्न पुग्छन् । युक्रेनको सच्चा मुक्तिदाता जेलेन्स्कीलाई ठान्दछन् । उनलाई अत्यधिक मतले राष्ट्रपतीय चुनावमा जिताउँछन् । सन् २०१९ मा यहुदी मूलका भोलोदिमिर जेलेन्स्की युक्रेनको छैटौं राष्ट्रपतिमा नियुक्त हुन्छन् ।
युक्रेनलाई भ्रष्टाचार र कुशासनबाट मुक्त बनाउने कसम खाएर राष्ट्रपतिको गरिमामय र सर्वशक्तिशाली पदमा पुगेका जेलेन्स्की शुरु–शुरुमा असाध्यै राम्रो काम गर्न लागेको अभिनय गर्छन् । राष्ट्रपति बनेको केही समयपछि उनी युक्रेनका सबैभन्दा धनाढ्य मिडिया टाइकुनसँग धेरै हिमचिम बढाउँछन् । अन्य धनाढ्यहरुसँग पनि उनको सामीप्यता बढ्दै जान्छ । तर युक्रेनमा कुनै चमत्कार हँुदैन । भ्रष्टाचार र कुशासनको जालो झन् बढ्दै जान्छ । सन् २०२१ अक्टोबरमा पान्डोरा पेपर्सको सूचीमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीको नाम सर्वजनिक हुन्छ । पान्डोरा पेपर्सलेले राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको कालो धनको पर्दाफास गरिदिन्छ ।
युक्रेनका सीधासाधा जनतालाई थाहा हुँदैन कि उनीहरुका राष्ट्रपति भित्रभित्रै अमेरिकाको लागि काम गर्दै छन् भनेर । राजनीतिक र कूटनीतिक ज्ञानविहीन एउटा हास्य कलाकार राष्ट्रपति त भए तर सँगसँगै अमेरिकाको कठपुतली पनि बन्दै गए । अमेरिकाको दलाली गर्ने क्रममा उनले एउटा ठूलो भूल गर्न पुगे । अमेरिकाको इसारामा युक्रेनलाई उत्तरी एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नोर्थ एट्लान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसन्स– एनएटीओ) को सदस्य राष्ट्रमा सम्मिलित गराउने दिशातर्फ अग्रसर हुन थाले ।
नाटो अमेरिकी नेतृत्वको एउटा यस्तो सैन्य संगठन हो जुन ४ अप्रिल, १९४९ मा स्थापना भएको थियो । यो सैन्य संगठनको मूल उद्देश्य तत्कालीन सोभियत संघ (हालको रुस) को शक्तिलाई रोक्नु नै हो । नाटोको पहिलो महासचिव लर्ड इस्मेले नाटोको मूल उद्देश्य भनेको ‘रुसीहरुलाई बाहिर, अमेरिकीहरुलाई भित्र र जर्मनीहरुलाई तल राख्ने’ नै हो भनेर टिप्पणी गरेका थिए । फेब्रुअरी ९, सन् १९९० मा तत्कालीन सोभियत संघ र अमेरिकाको बीचमा जर्मनीको एकीकरण भएबापत नाटोले युरोपको पूर्वी भागतिर विस्तार नगर्ने मौखिक सम्झौता भएको थियो । तर यसको ठीक विपरीत नाटोले युरोपको पूर्वी भागतिर पनि आफ्नो विस्तार गर्ने क्रम झन्–झन् बढाउँदै गयो । पहिलेको सोभियत रुसका राज्यहरु लात्भिया र एस्टोनियालाई पनि नाटोमा संलग्न गर्दै युक्रेनलाई पनि सामेल गर्न अग्रसर भयो ।
यसले रुसको राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर खतरा उत्पन्न भयो । यसैको फलस्वरुप रुसले फेब्रुअरी २४, २०२२ का दिनदेखि आजसम्म युक्रेनमाथि सैन्य कारबाही जारी नै राखेको छ ।युक्रेनसँग रुसको २२९५.०४ कि.मि. लामो सिमाना छ, जसमा १९७४.०४ कि.मि. जमिनसँग जोडिएको र ३२१ कि.मि. समुद्री सिमाना छ । त्यसैले युक्रेन नाटोको सदस्य बन्न भनेको रुसमाथि ठाडोरुपमा अमेरिकी सैन्य खतरा मडराउनु हो भन्ने कुरा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले पुटिनले बारम्बार युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई नाटोको सदस्य नबन्न आग्रह गरिरहे । तर अमेरिकी उक्साहटमा जेलेन्स्कीले पुटिनको प्रस्तावलाई वास्तै नगरी नाटोमा संलग्न हुने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा रुस–युक्रेनबीच २४ फेब्रुअरी २०२२ बाट युद्ध शुरु भयो, जुन अहिलेसम्म चलिरहेको छ ।
अहिले युद्धको कारणले हजारौं मानिसले ज्यान गुमाइरहेका छन् । करिब १.५ करोड युक्रेनी नागरिकहरु आफ्नो देशबाट विस्थापित भएर शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य भइरहेका छन् । शहरहरु खरानी र भग्नावशेषमा परिणत भइरहेका छन् । खाना र पानीको अभावमा मानिसहरु मरिरहेका छन् । जताततै विनाश, रोदन, क्रन्दन, आगो, धुवाँको बादल र मृत्युको ताण्डव मात्रै देखिन्छ । रुसले कालासागरको बन्दरगाह रोकेको कारणले युक्रेनको २ करोड ५० लाख टन अन्न निर्यात हुन सकेको छैन । युक्रेनको करिब २० प्रतिशत भूभागमा अहिले रुसको नियन्त्रण हुन पुगेको छ ।युक्रेनको दुःखद त्रासदीको प्रमुख कारण भनेको त्यहाँका जनताको गलत निर्णय नै देखियो । युक्रेनी जनताले गलत व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको रुपमा छनोट गर्नु उनीहरुको ठूलो भूल हुन पुग्यो । त्यसैले देशको प्रमुख छनोट गर्दा त्यस देशका जनताले आफ्नो स्वविवेक र ज्ञानलाई गम्भीरतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
युक्रेन त्रासदीबाट नेपालले पनि थुप्रै कुराहरु सिक्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ । अहिले हाम्रो देशमा पनि विदेशी शक्तिहरुले आफ्ना नङ्ग्राहरु गाड्न शुरु गरिसकेका छन् । स्वदेशी खोल ओढेका विदेशी शक्तिहरुका दलालहरु नेपाली राजनीतिको आकाशमा देखा परिसकेका छन् । यस्ता विदेशी दलालहरुले राष्ट्रभक्तिको आडम्बरी खोल ओढेर सीधासाधा जनतालाई पटमूर्ख बनाउन महारथ हासिल गरेका हुन्छन् । यस्ता विदेशी महाशक्तिहरु आफ्ना दलालहरुलाई सत्ताशक्तिमा पु-याउन त्यस देशका मिडिया र बुद्धिजीवीहरुलाई नै आर्थिक प्रलोभन देखाई किनिदिन्छन् ।
यस्ता नव जेलेन्स्कीहरु हामीमाझ एउटा लोकप्रिय गायक, -यापर, पत्रकार, बुद्धिजीवी, फिल्मी नायक आदि पात्रहरुको छद्म भेषमा हामीलाई लोभ्याउन प्रस्तुत हुन सक्छन् । पैसाको खोलो बगाएर झुटो प्रचारप्रसार गरी आफ्ना एजेन्टहरुलाई सच्चा राष्ट्रभक्तको रुपमा प्रस्तुत गराई सत्तामा पु¥याउने प्रयत्नमा हरहमेसा लागिरहेका हुन्छन् ।
हाम्रो देशमा पनि अहिले नव जेलेन्स्कीहरुको उत्पादन हुन थालिसकेको छ । समयमै हामी नेपाली जनताले बुद्धि पु-याएनौं भने हाम्रो प्यारो मातृभूमि पनि युक्रेन नहोला भन्न सकिँदैन । त्यसैले नेपालले अहिलेसम्म मान्दै आइरहेको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कायम राख्नुपर्दछ । दुई विशाल छिमेकी महाशक्ति राष्ट्रहरु भारत र चीनसँग सधैँ सुमधुर समदूरीको सम्बन्ध कायम गर्नुपर्दछ । एक चीन नीतिलाई कायम राख्नुपर्दछ । कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रलाई चिढ्याउने वा उक्साउने कार्य गर्नुहुँदैन ।
हामीले आफैँसँग कसरी विजय हासिल गर्ने !
Ven, 01/07/2022 - 5:52am
हामी सबै जीवनमा विजय हासिल गर्न चाहन्छौँ । हामी दुःखमा पनि विजय प्राप्त गर्न चाहन्छौँ अनि सुखमा पनि । जीवनमा जति पनि चुनौतीहरू आउँछन्, ती सबैमा हामी जित होओस् भन्ने चाहन्छौँ ।
तर, यदि हामी आफूले आफैँमा विजय हासिल गरेनौँ भने सबै कुरा निरर्थक हुनेछ ।यदि एकमा शून्य जोड्ने हो भने एक त एक नै रहन्छ । शून्य भनेको त्यो अनन्त चीज हो । त्यसलाई नापजाँच गर्न सकिँदैन । त्यसलाई केही पनि गर्न सकिँदैन । यदि त्यस अनन्त चीजसँग हामी जोडियौँ भने के बन्न सक्छौँ ? म एक हुँ र त्यो अनन्त शून्य हो । यदि मेरो भेट मभित्र रहेको त्यो शून्यसँग, त्यो अनन्तसँग हुन्छ भने म पनि अनन्त बन्छु । तर, यो शरीर होइन । यो त नाशवान् छ र नाशवान् नै रहनेछ ।
तर, जुन भित्रको चीज छ, मभित्र जो अविनाशी बसेका छन् । यदि म उनीसँग जोडिएँ भने म पनि उनैमा समाहित हुन्छु । त्यसपछि, म पनि सबै स्थानमा हुन्छु । यदि म उनैमा लीन भएँ भने त मेरा लागि त्यही नै सबैथोक हो । यदि म लीन हुन सकिन भने त मेरो पूरै ध्यान यही माटोमा, यही शरीरमा जानेछ । यसले त एकदिन माटो नै बन्नुपर्नेछ । अनि, माटोमा गएर मिल्नु छ, चाहे हामी जेसुकै गर्ने कोशिश गरौँ ।
यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कुरा मानिसले बुभूmन् ! सबैभन्दा ठूलो कुरा त यो हो । जुन बाहिर भइरहेको छ त्यो सत्य होइन । त्यो बदलिरहनेछ, बदलिरहनेछ तर जुन यहाँ (हृदय) भित्र भइरहेको छ त्यो साँचो हो । त्यो सत्यको अभावमा सारा कुरा अधुरो छ । यदि हामीले यो कुरालाई बुझेनौँ, यो कुरालाई जानेनौँ भने हामी यहाँ आउनुको फाइदा नै के भयो र !
जे हामी गर्छौँ त्यसबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने हामी कहिल्यै, कतै पनि गइरहेका छैनौँ तर यो पनि साँचो होइन । एकदिन हामी सबैले जानु छ । यो कुरालाई जान्दाजान्दै पनि हामीले आफ्नो व्यवहारलाई कसरी बदलिरहन्छौँ ! यो जुन वास्तविकता छ, यसलाई हामी आफ्नो जीवनमा स्वीकार गर्दैनौँ । हामीले यो सत्यतालाई स्वीकार नगरेसम्म हाम्रो जीवनमा के हुन्छ र ? हामीले अवश्य पनि जानु नै छ तर कहाँ जान्छौँ त हामी ?महाभारतमा एउटा कथा छ । एकपटक वनमा भ्रमण गर्दै गर्दा पाँच पाण्डवलाई एकदमै धेरै तिर्खा लाग्यो । युधिष्ठिरले भाइहरूसँग भने, ‘तिमीहरूमध्ये कोही गएर पानीको खोजी गर अनि मलाई भन ।’
तब सहदेवले भने, ‘म जान्छु ।’
सहदेव गए तर फर्केर आएनन् । घण्टौँ बित्यो !
त्यसपछि नकुलले भने, ‘म जान्छु ।’
यस्तो गर्दागर्दै सबै भाइहरू गए तर फर्केर आएनन् । युधिष्ठिरलाई चिन्ता भयो । उनी खोज्नका लागि हिँडे । खोज्दा–खोज्दा तलाउको किनारमा पुगे । जसै उनी पानी पिउने उद्देश्यले अघि बढे, उनको आँखा भाइहरूमा प-यो । उनीहरू त किनारामा मरिरहेका छन् । तैपनि, युधिष्ठिरले आफ्नो हात पानीमा डुबाउँदै मात्र के थिए त्यहाँ भएका गन्धर्वले भने, ‘पख ! पानी नपिऊ ! पहिला मेरो प्रश्नको उत्तर देऊ अनि मात्र म पानी पिउने अनुमति दिनेछु ।’
युधिष्ठिरले भने, ‘होइन, मलाई धेरै तिर्खा लागेको छ । पानी दिनुहोस् ।’
गन्धर्वले भने, ‘तिम्रा भाइहरूले पनि मेरो कुरालाई सुनेन् अनि पानी पिउनतिर लागे । अहिले सबै मरिरहेका छन् । तिम्रो पनि यस्तै अवस्था हुनेछ ।’
तब युधिष्ठिर भन्छन्, ‘सोध्नुहोस् ! के सोध्न चाहनुहुन्छ !’त्यसपछि गन्धर्वले थुप्रै प्रश्नहरू सोधे । त्यसमध्ये एउटा प्रश्न थियो– ‘सबैभन्दा अचम्मको चीज के हो ?’युधिष्ठिरले भने, ‘मानिस नै यस्तो अचम्मको प्राणी हो जसलाई यो कुरा थाहा छ– उसले एकदिन मर्नुपर्छ । तर, ऊ आफू कहिल्यै पनि मर्दिन भने जसरी जिउँछ । यसकारण मानिस अचम्मको प्राणी हो !’
यो कुरा मर्नेबारेको होइन । कुरा त बाँच्ने तरिकाका बारेमा हो । मानिस कसरी बाँचिरहेको छ ! कुरा धन कमाउने विषयमा पनि होइन । तर, जुन तरिकाले हामी कमाइरहेका छौँ, कुरा त्यसको हो । हामी त यसरी बटुलिरहेका छौँ कि मानौँ हामी यो धनलाई आफूसँगै लैजानेछौँ । यो सम्भवै नहुने कुरा हो । किनभने, हामी सबैले यहाँबाट एक न एक दिन जानुपर्छ तर हामी आफूसँग केही पनि लिएर जान सक्दैनौँ । यदि कुनै चीजलाई लिएर जान सक्छौँ भने त्यो एउटै कुरा छ ः त्यो हो– ‘शान्ति’ । जसलाई प्राप्त गर्न तपाईँले आफूले आफैँलाई चिन्नु आवश्यक छ । आफूभित्र ती परम् शक्तिलाई, त्यो शान्तिलाई अनुभव गर्नु आवश्यक छ । जसलाई हासिल गरेपछि तपाईँ वास्तवमा विजयी हुनुहुनेछ ।
हामी मानिसमा एउटा बानी छ– बिर्सने । हामी को हौँ ? हाम्रो स्वभाव के हो ? हाम्रो प्रकृति के हो ? हाम्रो चाहना के हो ? हाम्रो आवश्यकता के हो ? हामी यी कुराहरूलाई बिर्सन्छौँ । वस्तुतः कुनचाहिँ यस्तो चीज छ जसलाई भुलेपछि हाम्रो जीवनमा एउटा यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन्छ जसले गर्दा हामी यी सबै कुराहरूलाई बिर्सन्छौँ– ‘यो सबैथोक के हो, के भइरहेको छ, मलाई किन यस्तो नराम्रो भइरहेको छ । कसैलाई चाहिँ किन राम्रो भइरहेको छ !’
उल्लिखित धेरै कुरालाई हामी बिर्सन्छौँ ।
वास्तविकता के हो भने, अज्ञानता तपाईँभन्दा टाढा छैन अनि ज्ञान पनि तपाईँभन्दा टाढा छैन । सुख र दुःख दुवै तपाईँभन्दा टाढा छैन । तपाईँ आफ्नो जीवनमा जतासुकै जानुहोस्, जेसुकै काम गर्नुहोस्– सुख र दुःख दुवै कुरा तपाईँको साथैमा हिँडिरहेको हुन्छ ।तपाईँको जीवनमा सबै कुरा छ र छैन पनि । दुवै कुरा हुन्छ । तपाईँ आफ्नो कोठाभित्र पसेपछि चुकुल लाउनुहुन्छ । त्यतिखेर पनि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न । अन्य थुप्रै कुराहरू तपाईँभित्र त्यस कोठामा गएका हुन्छन् । तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, जीवन पनि छ अनि मृत्यु पनि हुन्छ । त्यस कोठामा सबै कुरा हुन्छन्– ज्ञान, अज्ञान, अँध्यारो र उज्यालो पनि हुन्छन् । वास्तवमा ती सृष्टिकर्ता पनि त्यस कोठाभित्र साथैमा हुन्छन् । यदि हामीले ढोकालाई बन्द गरेर त्यसमा ताल्चा लगाएपछि बत्ती निभायौँ भने अँध्यारो हुनेछ ।
जब ढोका पहिल्यै बन्द थियो भने अँध्यारो कहाँबाट आयो होला ? कसरी भने त्यो तपाईँको साथमा नै आयो । धर्म पनि तपाईँसँगै छ अनि अधर्म पनि तपाईँसँगै छ । सारा कुरा– तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ सबै हुन्छ । फरक के मात्र हो भने, यदि तपाईँलाई यी सबै साथैमा हुन्छन् भन्ने थाहा भयो भने तपाईँले चाहनुभएको कुरालाई अपनाउन सक्नुहुन्छ । प्रेम पनि तपाईँसँगै आएको छ अनि घृणा पनि । यदि तपाईँ जिउन सिक्न चाहनुहुन्छ भने प्रेमलाई आत्मसात् गर्न सिक्नुहोस्, घृणालाई होइन । ज्ञानलाई स्वीकार गर्न सिक्नुहोस्, अज्ञानतालाई होइन । यदि जीवनमा प्रकाश होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने आफ्नो जीवनमा प्रकाश ल्याउन सिक्नुहोस् । अँध्यारो आफैँ हटेर जानेछ ।
यदि तपाईँ आफ्नो जीवनलाई थोरै भए पनि बदल्न चाहनुहुन्छ भने केवल तीन सेकेन्ड सोच्नुहोस् । काम गर्नुभन्दा पहिला सोच्नुहोस् । केवल तीन सकेन्ड– तपाईँ के गर्न लागिरहनुभएको छ । त्यसपछि जे गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुहोस् । किनभने, क्रोध पनि तपाईँसँगै हुन्छ अनि क्षमा पनि । तीन सेकेन्डमा तपाईँ रोज्न सक्नुहुन्छ– क्रोध चाहिन्छ कि क्षमा । क्षमाले प्रेमलाई ल्याउँछ । प्रेमले उज्यालो ल्याउनेछ । उज्यालोले आनन्द ल्याउनेछ– तीन सेकेन्डमा । वास्तवमा तपाईँ पहिला गर्नुहुन्छ अनि पछि सोच्नुहुन्छ । यसै कारण तपाईँको जीवनमा दुःख हुन्छ ।
हामी जे–जे गर्छौँ, यसमा दुईवटा नै सम्भाव्यता रहन्छ– राम्रो पनि हुन सक्ला र खराब पनि हुन सक्ला । यदि हामीले सोच–विचार गरेर काम ग¥यौँ, यो बुझेर काम ग¥यौँ– हाम्रो प्रकृति नै हो बिर्सने अनि मैले के कोशिश गर्नुपर्छ भने म नबिर्सूँ, त्यस चीजलाई नबिर्सूँ जुन मेरा लागि आवश्यक छ । यदि यो कुरा याद रह्यो भने तपाईँको जिन्दगीमा आफैँ नै परिवर्तन आउँछ । यदि हामी यो संसारमा कुनै परिवर्तनको कामना गर्छौँ भने त्यो परिवर्तन पनि संसारबाट शुरु हुने होइन । त्यो तपाईँबाटै प्रारम्भ हुन्छ ।
तपाईँ जे जति कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, आनन्द पाउने अपेक्षाले नै गर्दै हुनुहुन्छ । तपाईँ दुःख सहन गर्न सक्नुहुन्न । मानिसको नाताले तपाईँको प्रकृति कस्तो छ भने, तपाईँ दुःख सहन सक्नुहुन्न । तथापि, अपार सुखलाई भने तपाईँ सहन सक्नुहुन्छ । मानिसका लागि सुखको कुनै सीमा हुँदैन । सानो दुःखका कारण पनि मानिस दुःखी हुन्छ । हरेक चीजमा सुख र दुःख दुवै हुन्छ तर यसमध्येबाट तपाईँले नै छान्नुपर्छ । तपाईँ आफ्नो जीवनमा के चाहनुहुन्छ– सुख चाहनुहुन्छ या दुःखको चाहना राख्नुहुन्छ ! जुन दिन दुःखी हुन चाहनुहुन्छ, दुःख पनि उपलब्ध हुन्छ । जुन दिन सुखको अपेक्षा गर्नुहुन्छ, त्यो सुख पनि उपलब्ध हुन्छ । यदि तपाईँले यस कुरालाई बुझ्नुभयो भने तपाईँले आफ्नो जीवनमा धेरै कुरामा परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्छ ।
Ven, 01/07/2022 - 5:29am
सडकपेटीमा सञ्चालन हुँदैआएका सरल र न्यून मूल्यमा खानपाइने पसलका कारण उपत्यकामा हैजाको संक्रमण फैलियो भन्ने सरकारको निष्कर्ष विवादास्पद छ । त्यसमा पनि यस्ता पसलहरु बन्द नै गर्ने उसको निर्णय त आलोच्य नै बन्यो । हैजा फैलिन थालेपछि काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले सडकपेटीका भोजन–पसललाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । दुई साताअघि बागबजार र सानेपा क्षेत्रमा बाटोमा बेच्न राखेको चटपटे, पानीपुरी र चाटको लगायत खानेकुरा खादा हैजा फैलिएको अनुमान महानगरको छ ।
दैनिक गुजारा चलाउन बाटो, चोक र चौरमा खानेकुरा बेच्ने गरेका सामान्य व्यापारीको रोजीरोटी खोसिने र पेशा नै बन्द गर्ने विकल्प समाजवाद उन्मुख भनिएको मुलुकका लागि सह्य हुनसक्तैन । कलेज पढेर फर्किने विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ बाटोमा बेच्न राखिएको पानीपुरी र चटपटे नै हो । विश्वका जुनसुकै शहरका चोक, गल्ली, पार्क लगायत मनोरञ्जन क्षेत्रमा स्ट्रिट फुड राख्ने चलन छ । थोरै रकम आर्जन गर्नेको पहिलो रोजाइ स्ट्रिट फुड नै हुन्छ । नेपालमा स्ट्रिट फुडको चलन चलेको वर्षौ भैसकेको छ । महानगरपालिकाले स्ट्रिट फुडको कारण हैजा फैलिएको हो भन्ने निक्र्योल निकाल्न सकेको छैन । हचुवाको भरमा बाटोको खानेकुरा खादा हैजा फैलिएको अनुमान गर्नु गलत हुन्छ ।
स्वाथ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दूषित पानीको कारण हैजा फैलिएको निष्कर्ष निकालिसकेको छ । यदि पानीकै कारण हैजा फैलिएको हो भने महानगरपालिकाले दूषित पानी बेचबिखन गर्न रोक लगाउनुपर्छ । खाद्य पदार्थ, पानी, मासुजन्य पदार्थ लगायत सबै किसिमको खाद्यान्न अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर अनुगमन गर्न नसक्ने महानगरले बाटोमा खानेकुरा बेच्न प्रतिबन्ध लगाएर हास्यास्पद निर्णय गरेको छ । यसको सर्वत्र आलोचना शुरु हुन थालेको छ ।
कसैले भनेको भरमा अनुमानको आधारमा सामान्य जीविकोपार्जन गरिरहेका परिवारको रोजीरोटी खोस्नु गलत हुन्छ । महानगरले आफ्नो क्षेत्रमा रहेको जारको पानी ल्याउने कम्पनीको अनुमगन गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको गोदाम अनुमगन गर्नुपर्छ । सबै स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति हुन्छ । त्यस उपसमितिलाई सक्रिय बनाउनु र संक्रमणका सबै क्षेत्रमा अनुगमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । पानीबाट हैजा सरेको प्रमाणित भैसकेपछि महानगर संयन्त्रले सबै कम्पनीको पानीको गुणस्तर मापन गर्नुपर्छ । स्ट्रिट फुड बिक्री गर्नेले प्रयोग गरेको पानी पिउन योग्य हो वा होइन अनुगमन गर्नुपर्छ । यदि जारकै पानीबाट हैजा फैलिएको हो भने त्यस्ता जारको कम्पनी बन्द गराउनुपर्छ । त्यसो भए बाटोमा खानेकुरा बेच्न राख्नेले खानयोग्य जारको पानी प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन् ।
इनार, कुवा वा धाराको पानीको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्छ । पानीमा पियुस र क्लोरिनको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्छ । होइन भने बाटोमा बेच्न राखेको खानेकुरामा प्रतिबन्ध लगाउँदैमा राजधानीमा हैजा नियन्त्रण गर्न सकिदैन । स्ट्रिट फुड बेच्नेमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भन्दा पनि अनुगमन गरी व्यवस्थित गर्नुपर्छ । बन्द वा निषेध समस्याको समाधान होइन । सडकपेटीका पसल व्यवस्थित किसिमले चल्नुपर्छ ।
धादिङमा बस दुर्घटना हुँदा ३० जना घाइते
Ven, 01/07/2022 - 5:08am
काठमाडौबाट रौतहटतर्फ जाँदै गरेको यात्रुबहाक रात्री बस गयराती दुर्घटना हुँदा ३० जना घाइते भएका छन् ।
पृथ्वीराजमार्गमा पर्ने गल्छी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ स्थित चिरौँदीमा प्रदेश ३–०१–००५ ख –९७२९ नम्बरको यात्रु खचाखच भएको बस सडकमा पल्टेर दुर्घटना भएको इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी नायव उपरिक्षक भावेश रिमालले बताउनुभयो ।
सडक विग्रेको र घुम्ती सडकमा राती दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा ३० जना यात्रु घाइते भएका छन् । घाइतेहरुको स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा उपचार भइरहेको छ । ७ जना गम्भीर घाइते भएकाहरुलाई थप उपचारका लागि काठमाडौस्थित ट्रमा सेन्टरमा पठाइएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
१५ हजार घुससहित अदालतका कर्मचारी रंगेहात पक्राउ
Ven, 01/07/2022 - 4:59am
गोरखा जिल्ला अदालतका एक कर्मचारी (तहसिलदार) १५ हजार घुससहित पक्राउ परेका छन् ।
तहसिलदार रामचन्द्र केसीलाई बिहीबार गोरखा अदालत नजिकै एक होटलबाट पक्राउ गरेकाे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयले बताएको छ।काम मिलाइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग केसीले घुस लिएको र उनलाई रंगेहात पक्राउ गरिएको दाबी अख्तियारको छ।
Ven, 01/07/2022 - 4:44am
काभ्रेको बनेपामा अस्पतालका कर्मचारी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा ४३ जना घाइते भएका छन् । बनेपा-१० स्थित अपांग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रका कर्मचारी बोकेको बा.१.ज ५७४७ नम्बरको बस दुर्घटनामा परेको हो ।
प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा ५२ वर्षीय लेख कुमारी बस्नेतको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी चक्रराज जोशीले कर्मचारी बोकेर निस्केको अस्पतालको बस मोटरसाइकललाई साइड दिने क्रममा भासिएर पल्टिएको हो । घाइतेको जिल्लाका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
दक्षिण कोरियामा १३ जना नेपाली पक्राउ, नेपाल फर्काउने तयारी
Ven, 01/07/2022 - 4:31am
दक्षिण कोरियामा अवैध रूपमा काम गर्दै आएका १३ नेपाली पक्राउ परेका छन् । पक्राउ परेका नेपालीहरूको नाम ठेगाना भने खुलेको छैन । ती सबै नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काउने योजना बनाइएको सुवन अध्यागमन कार्यालयले जनाएको छ ।
कृषि तथा माछापालन मौसमी कामदारको रूपमा प्रवेश गरेका चार जना ठेक्का अवधि नपुग्दै गैरकानुनी रूपमा अर्को ठाउँमा काम गरिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन् । यस्तै बसाइ अवधि सकिएका अन्य नौ जना पक्राउ परेका छन् । दक्षिण कोरियाको अध्यागमन ऐन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा उनीहरू पक्राउ परेका हुन् ।
सशस्त्र प्रहरीका ५६ इन्स्पेक्टरको डीएसपीमा बढुवा सिफारिस
Ven, 01/07/2022 - 4:18am
सशस्त्र प्रहरीका ५६ जना सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मा बढुवाको लागि सिफारिस भएका छन् ।
बिहीवार बसेको बढुवा समितिको बैठकले उनीहरुलाई बढुवा सिफारिस गरेको हो । बढुवामा चित्त नबुझेका अधिकारीहरुले त्य विरुद्ध सात दिनभित्र नियम अनुसार उजुरी दिन सक्ने नायव महानिरीक्षक बिदुर खड्काद्धारा प्रेषित सूचनामा उल्लेख छ ।
शुरू भयो राजनीतिक खेल : मुख्यमन्त्री हटाउन दलैपिच्छे हस्ताक्षर संकलन
Ven, 01/07/2022 - 3:59am
बजेट पास भएलगत्तै वागमती प्रदेशको राजनीतिक सत्ता परिवर्तनको खेल शुरू भएको छ । यसका लागि दलहरूले बेग्लाबेग्लै हस्ताक्षर संकलन थालेका हुन् । मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिन हाल माओवादी र कांग्रेसबाट मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी मन्त्री तथा राज्यमन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी गरिएको छ ।
वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलाई हटाएर नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा सत्तारुढ दलहरू बीचमा छलफल भएको छ । सत्तारुढ दलका संसदीय दलका नेताहरू, मुख्यमन्त्री पाण्डेबीच छलफल भएको हो । दलहरू बीच मुख्यमन्त्री परिवर्तनका विषयमा छलफल भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य युवराज दुलालले बताउनुभयो । संसद् नबस्ने भएपछि मुख्यमन्त्री परिवर्तनका लागि बहुमतको हस्ताक्षर आवश्यक हुने भएकाले सत्तारुढ दलका सांसदहरूले दलैपिच्छे हस्ताक्षर संकलन गरेको दुलालले बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेस वागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रवक्ता प्रभात तामाङले आफूहरूले हस्ताक्षर अभियान शुरू गरेको पुष्टि गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले राजेन्द्र पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुभन्दा दुई÷तीन दिनअघि हस्ताक्षर अभियान चलाएका थियौं । हाल पनि सोही प्रक्रिया अवलम्बन गरेका हौं । बजेट अधिवेशनपछि हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार स्थापना गर्ने पूर्वसहमतिअनुसार प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनका लागि हस्ताक्षर संकलन शुरू भएको हो ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले सहमति कार्यान्वयन सहजरूपमा गर्नेमा कांग्रेस विश्वस्त रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेशसभाबाट बजेट पास भएसँगै मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्न सत्तारुढ गठबन्धन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसद्हरूको हस्ताक्षर संकलन शुरू गरिएको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले ‘केन्द्रको निर्देशनबिना मुख्यमन्त्री नछाड्ने’ बताएपछि कांग्रेस र माओवादीले सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन शुरू गरिएको हो ।सत्तारुढ गठबन्धनको ‘पूर्वसहमति’ चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्ने भन्ने थियो । सोही सहमतिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेट पास भएपछि पूर्वसहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बानियाँ सत्तारोहणको तयारीमा हुनुहुन्छ ।
पाण्डे ६ महिनापछि नेतृत्व छाड्ने गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा र नेकपा (एस) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो । उहाँलाई माओवादीका २३, नेपाली कांग्रेसका २२, नेकपा (एस) का १३ र जसपाका १ सहित ५९ सांसद्को समर्थन थियो ।नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुअघि २०७८ कात्तिक ४ गते भएको ‘लिखित सहमति’ मा आधा अवधिपछि कांग्रेसका संसदीय दलका नेता बानियाँलाई मुख्यमन्त्री बनाइने उल्लेख छ ।
सहमतिमा प्रदेशका बाँकी कार्यकालमध्ये आधा अवधि पाण्डे र बाँकी आधा अवधिमा बानियाँ मुख्यमन्त्री बन्ने उल्लेख छ । कांग्रेस, नेकपा (एस) र नेकपा माओवादीबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौतामा कांग्रेसबाट बानियाँ, नेकपा (एस) बाट पाण्डे र माओवादीबाट शालिकराम जम्कट्टेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
कांग्रेसले सहमतिअनुसार सहज आफूले सत्ताप्राप्त गर्नुपर्ने माग गरे पनि मुख्यमन्त्री पाण्डे भने केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशनपछि मात्र पछाडि हट्ने भनेर पन्छिएपछि हस्ताक्षर संकलन गरिएको एक सांसदले जानकारी दिनुभयो । ‘सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्रीले सहज सत्ता नछाड्ने देखियो । त्यसकारण यस्तो गर्नुपरेको हो,’ उहाँले भन्नुभयो ।बजेट पास भएपछि सबै प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कांग्रेस नेता बानियाँसँग आधा÷आधा समय मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति गर्नुभएको थियो । तत्कालीन समयमा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय प्रवक्ता प्रकाशरण महतको उपस्थितिमा कांग्रेस र नेकपा (एस) बीच उक्त ‘सहमति’ भएको थियो ।
बानियाँ यसअघि पनि मुख्यमन्त्री बन्ने होडमा हुनुहुन्थ्यो ।
नेकपा एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी बनेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पतमा पर्दा बानियाँको मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा थियो । तर, गठबन्धनको भागबण्डामा मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको थियो । सोहीअनुसार पाण्डे मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।समाजवादीको नेतृत्वमा स्थानीय तहको निर्वाचन सकेर प्रदेश सरकारको बजेट ल्याउने र त्यसपछि बजेट कार्यान्वयन गर्दै प्रदेशको चुनाव कांग्रेसको नेतृत्वमा गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । सोही सम्झौताअनुसार असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेटपछि सरकार पुनर्गठन गर्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाइने भनिएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकार परिवर्तनबारे केन्द्रको निर्णय मानेर अघि बढ्ने बताउनुभएको छ । बानियाँ भने सरकार परिवर्तन हुने विगतको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले पहिला भएका सहमतिअनुसार गठबन्धन सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । ‘पहिला सम्झौता जेअनुसार भएको हो, त्यही कार्यान्वयन हुनुपर्दछ,’ बानियाँले भन्नुभयो– राजनीतिमा सम्झौता, समझदारी र विश्वास हुन्छ । राजनीतिक सँस्कारअनुसार गठबन्धनले सम्झौतापालना गर्छ ।
उहाँले सम्झौता कार्यान्वयन नभए तत्कालीन नेकपामा केपी शर्माओली र प्रचण्डबीच भएको घटना दोहोरिने चेतावनीसमेत दिनुभएको छ ।मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशबाट आफूहरूले भनेर केही नहुने भन्दै केन्द्रको निर्णयअनुसार चल्ने प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो– हामीले भनेर मात्र हुने होइन, केन्द्रबाट शीर्ष नेताहरूले जे भन्छन्, सोहीअनुसार हुने हो । केन्द्र सरकारले निर्वाचन आयोगको सुझावअनुसार असार अन्तिम सातासम्म प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति तोक्ने सम्भावना रहेका कारण त्यसअघि उक्त विषयको टुंगो लाग्ने सांसद्को दाबी छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को लागि ल्याएको विनियोजित बजेट बहुमतले पारित भएको छ । प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकमा सरकारले ल्याएको बजेट बहुमतले पारित गरिएको हो । बिहीबार विहान ११ बजे बसेको बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयका शीर्षकमाथि सांसद्हरूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । बैठकमा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र निकायका बजेटका शीर्षकमाथि १९ सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो ।
प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि कुल ७० अर्ब ९३ करोड अनुमानित बजेट ल्याएको छ । असार १ गतेको प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जम्कट्टेलले सरकारका तर्फबाट बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । सरकारको बजेटमध्ये चालुतर्फ १९ अर्ब २ करोड, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड, वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
झम्सिखेल चोकमा अत्याधुनिक ट्राफिक लाईट
Ven, 01/07/2022 - 3:56am
ललितपुर महानगरपालिका–३ वडाले झम्सिखेलमा दुई वटा अत्याधुनिक सेन्टरलाईज ट्राफिक बत्ती जडान गरेको छ । उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशीले नयाँ ट्राफिक लाइटको स्वीच थिचेर ट्राफिक बत्ती उद्घाटन गर्नुभयो ।
सो अवसरमा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जोशीले यात्रुमैत्री प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई बढावा दिन वडाले गरेको प्रयास अनुकरणीय रहेको धारणा राख्नुभयो । वडाले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै आम सडक प्रयोगकर्तालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने र दैनिक सडक प्रयोगमा हुने समस्यालाई ट्राफिक लाईट सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको भनाई थियो ।
सो अवसरमा वडाअध्यक्ष श्रीगोपाल महर्जनले निकै व्यस्त र भीडभाड हुने सो क्षेत्रमा सम्भावित सवारी दुर्र्घटना रोक्न, सुरक्षित र सहज तरिकाले बाटो काट्नको लागि सो लाइट राखिएको बताउनुभयो । वडाअध्यक्ष महर्जनले सो बत्ती जडानबाट झम्सिखेल चोकमा जान आउन सजिलो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । ट्राफिक लाईट जडान गरेर सवारी व्यवस्थापनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन स्थानीय तह अग्रसर हुनुपर्ने पनि वडाअध्यक्ष महर्जनले बताउनुभयो ।
Ven, 01/07/2022 - 3:48am
नेपाल प्रहरीमा एसएसपी बन्ने दौडधुप शुरू भएको छ । केही दिन पहिले नेपाल प्रहरीमा १७ जना डीआईजी बढुवा सिफारिस भएसँगै रिक्त एसएसपीमा बढुवा हुन दौडधुप शुरू भएको हो ।
१७ डीआईजी बढुवा सदर भएपछि प्रहरीमा ३२ जना एसएसपी दरबन्दी रिक्त रहेको छ । अब एसएसपी बढुवाको प्रक्रिया शुरू भएसँगै प्रहरीमा दौडधुप शुरू भएको हो । एसएसपी बन्ने दौड धुपमा २०५१ साल सालमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकमा नियुक्ति भएको टोलीदेखि २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएर सेवा परिवर्तन गरी नेपाल प्रहरीमा आएको र २०५४ सालमै नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकमै भर्ना भएका टोली रहेको बताइएको छ ।
बढुवाको पहिलो नम्बरमा भने सुदूरपश्चिम कञ्चनपुर घर भएका २०५१ साल सालमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना भएका एसपी दिल्लीराज विष्ट र दोेस्रो नम्बरमा नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकमा नियुक्त भई विशेष प्रहरी गएका र पछि सेवा परिवर्तन गरी नेपाल प्रहरीमै आएका गणेश चन्द रहनुभएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विष्णुबहादुर केसीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘एसएसपीको लाइनमा २०५३ सालको टोली पनि छ तर विष्ट र चन्द २०५१ सालमै नियुक्त हुनु भएको तर चन्दले सेवा परिवर्तन गरी आएकाले एसएसपीमा विष्ट पहिलो नम्बरमा पर्नुभएको हो ।’
विष्ट २०७२ सालमा एसपी हुनुभएको हो भने अन्य प्रतिसप्रर्धी २०७४ सालमा एसपी भएका हुन् । २०५१ सालको ब्याजका सबै एसएसपी र केही डीआईजी भइसकेका छन् । यसबाहेक राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भएर २०५८ सालबाट नेपाल प्रहरीमा प्रवेश गरेका तीन व्याजका १८ जना र नेपाल प्रहरीकै तीन ब्याजका १६ जना एसएसपीको दौड धुपमा रहेका छन् ।
यसै गरी सिद्धिविक्रम शाह, माधवप्रसाद श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर विक, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, ओमबहादुर राना, सुरेन्द्रबहादुर गुरुङ, हिमालयकुमार श्रेष्ठ, सञ्जीव शर्मा दास, विमल बस्नेत, मनोज यादव र दिलिपसिंह देउवा एसएसपीको प्रतिस्पर्धामा रहनुभएको छ । २०५४ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाटै प्रहरी सेवामा प्रवेश गर्नुभएका सुशीलसिंह राठौर, विनोद घिमिरे, दीपक बस्नेत, जयराज सापकोटा, रामेश्वरप्रसाद यादव, शारदाप्रसाद चौधरी र दीपेन्द्र घर्ती पनि एसएसपी बन्ने दौडमा रहेका छन् ।
उता २०५४ सालमै नेपाल प्रहरीको प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुनु भएका एसपी राजन अधिकारी, ईश्वर कार्की, मनोजकुमार केसी, रेवती ढकाल, दानबहादुर कार्की, राजेन्द्रप्रसाद भट्ट, किसनसिंह थापालगायतको टोली पनि बढुवाको लाइनमा रहेको छ । पछिल्लो समय प्रहरीले शक्ति केन्द्रको दबाबमा वरीयता मिचिँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । एसपी विष्ट भने २०५१ सालमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुनुभएको र उहाँको ब्याज अहिले सबै एसएसपी भइसकेको बताइएको छ । अहिले एसएसपीको लाइनमा रहेका अधिकांश टोली २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भर्ना भई सेवा परिर्वतन गरी नेपाल प्रहरीमा आएका टोली भएकाले वरीयता क्रममा विष्ट पहिलो नम्बरमा रहेको बताइएको छ ।
Ven, 01/07/2022 - 3:36am
निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्ने भए साउन मसान्तभित्र उपलब्ध गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आयोगले विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोगसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दै आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रयोग गर्ने भए आफूहरूले भनेजस्तो मेसिन साउनभित्र उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको हो ।
आयोगले संविधान तथा संघीय कानुनबमोजिम हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसद्का सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य तथा स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनहरूमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । सोही आधारमा विद्युतीय मतदान यन्त्रको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो । समितिले तयार पारेको प्रतिवदेनउपर आवश्यक निर्णय गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो ।
प्रतिवेदनमा स्वदेशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्र तत्काल व्यवस्थापन हुन सक्ने अवस्था हाल विद्यमान नभएको पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘आगामी २०७९ श्रावण मसान्तसम्ममा आयोगलाई उपलब्ध हुने गरी अन्य देशमा निर्मित विद्युतीय मतदान यन्त्रको आवश्यक प्रबन्ध गरिदिन गृह मन्त्रालयमार्फत् नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई लेखी पठाइएको छ’ – आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भन्नुभयो ।
प्रतिवेदनमा विद्युतीय मतदान मेसिनको स्पेसिफिकेसन, मेसिनको गुणस्तर चेकजाँच, विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने तथा मेसिनउपर सार्वजनिक रूपमा उठान हुन सक्ने जिज्ञासाहरूको समाधान, भविष्यमा बृहत्तर रूपमा मुलुकभर यसको प्रयोग गर्दा मेसिनमा गर्नुपर्ने सुधार र विद्युतीय मतदान मेसिनको सफलतापूर्वक कार्यान्वयन भएका मुलुकहरूको अनुभवबाट सिकेर उन्नत एवम् विशिष्ट प्राविधिक क्षमताले युक्त यन्त्रको प्रयोग नेपालको निर्वाचन व्यवस्थापनमा गर्ने जस्ता विषयहरू समावेश भएको सहायक प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो ।
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा आयोगले छ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा मेसिनको प्रयोग गरेको थियो । साथै ०७१ सालको संविधानसभा उपनिर्वाचनमा बर्दिया, बागलुङ, काठमाडौं, कैलालीलगायत पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा पनि मेसिनको सफलतापूर्वक प्रयोग गरिएको थियो ।
Ven, 01/07/2022 - 3:33am
चीन सरकारको सहयोगमा पुनर्निर्माण भइरहेको वसन्तपुरस्थित नौतले दरबार आगामी मङ्सिरमा सर्वसाधारणका लागि खोल्ने तयारी भइरहेको छ । हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक सन्दिप खनालले बिहीबार नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा आगामी मङ्सिरसम्ममा पुनर्निर्माणका सबै काम सम्पन्न भई सर्वसाधारणको लागि खुला हुनेछ ।
नौं तले दरबारको अधिकांश काम सकिएसँगै स्काफोल्डिङ निकालिएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको प्रमुख आकर्षक नौतले दरबार वरपर घुम्न सक्नेगरी सबै संरचना हटाइसकिएको छ । ५ प्रतिशत काम मात्र बाँकी रहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘सोकेस र लाईटिङ जडानबाहेक सबै काम सम्पन्न भएको छ ।’चीन सरकारको सहयोगमा जारी दरबारको पुनर्निर्माण कार्य सम्झौता अवधि अर्थात आगामी मङ्सर ६ गतेभित्रै सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमका अनुसार पुनर्निर्माणसँगै लाइटिङ र सोकेर निर्माण गर्न निर्माण कम्पनीलाई नै आग्रह गर्ने तयारी भइरहेको छ । विभागले वसन्तपुर दरबार पुनर्निर्माण लगत्तै डिस्प्ले विद्युतीकरणदेखि लाइटिङ, सीसीटिभीलगायत उच्च प्रविधि जडान गर्न निर्माण कम्पनीलाई आग्रह गरेको र निर्माण कम्पनीबाट सकरात्मक जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ ।महानिर्देशक गौतमले सबै काम सकिएलगत्तै संग्रहालयका समाग्री यथास्थानमा राखेर सर्वसाधारणको लागि नौतले दरबार खुला गरिने बताउनुभयो । चीन र नेपाल सरकारबीच २०७३ पुस १६ मा २०७२ सालको भूकम्पले पूर्ण क्षतिग्रस्त नौतले दरबारसँगै कीर्तिपुर, भक्तपुर र काठमाडौं टावर पुनर्निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो ।
विभागका महानिर्देशक गौतमले पुनर्निर्माण सकिएलगत्तै उक्त संरचनाभित्र त्रिभुवन, महेन्द्र र वीरेन्द्र संग्रहालयका सामग्री राखिनेछ । उहाँले नौतले दरबारभित्र नयाँ सजावटसँगै गहना र अन्य हातहतियार संग्रहालय समेत राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो– ‘थप सजावटका साथ पर्यटकलाई आकर्षित गर्नेगरी नयाँ सोकेस र लाइटिङ प्रणाली जडान गरी संग्रहालय खुला गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं ।’निर्माण सम्पन्न भएर बिदा हुनुअघि नेपाल सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई परियोजना पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको १० दिनभित्र प्रमाणपत्र दिनुपर्ने, पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि दुई वर्षसम्म चिनीयाँ पक्षले अनुगमन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सम्झौतामा दुवै पक्षको सहमतिबिना परियोजनासँग सम्बन्धित नक्सांकन, डिजाइन तेस्रो पक्षलाई दिन नपाइनेलगायतका विषय पनि उल्लेख छ । यसअघि चीन सरकारको तर्फबाट नेपालमा दरबार हाइस्कुल पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने नुवाकोटको सात तले दरबार पुनर्निर्माण हुने चरणमा छ । चीन सरकारको एजेन्सी फर इन्टरनेसनल इकोनोमिक कोअपरेसनको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा वि.सं. २०७४ मा सम्झौता भई निर्माण शुरू भएको थियो । । वसन्तपुर दरबार परिसरको ५ हजार ६ सय वर्गमिटर क्षेत्रको संरक्षण गर्न ९ करोड ५० लाख चिनियाँ युआन अर्थात् करिब २ अर्ब नेपाली रुपियाँमा निर्माण सम्झौता भएको हो । टर्न कि परियोजनाअन्तर्गत नौतले दरबार पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन लगभग ५ महिना लाग्नेछ ।
हाम्रो पात्रोले सुरु गर्‍यो ई-लर्निङ्ग प्याल्टफर्म
Ven, 01/07/2022 - 3:18am
हाम्रो पात्रोले नयाँ फिचरको रूपमा “हाम्रो लर्निङ सेन्टर” ल्याएको छ । एउटै एपमार्फत विभिन्न सेवाहरू दिँदै आएको हाम्रो पात्रोले डिरयवाक सिफल स्कुलसँगको सहकार्यमा यो सुविधा विटा भर्सनको रूपमा ल्याएको हो ।
स्रोत र साधनको अभावमा अधिकांश विद्यार्थीहरू गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परेको छ । समयमा पाठ्यपुस्तकहरू उपलब्ध नहुने र उचित मार्गदर्शन गर्ने शिक्षकहरूको अभावको कारणले धेरै विद्यार्थीहरूले शिक्षामा समस्या भोग्नु परिरहेको छ। प्रायः विद्यालयमा दक्ष शिक्षकको कमि आम विद्यार्थीहरूले महसुस गर्ने गरेका छन् । यो दुर्गम र गाउँहरूको मात्र नभएर पूरै नेपालको साझा कथा हो । अब यो विद्यार्थी र गुणस्तरीय शिक्षाबीचको दुरि हाम्रो लर्निङ सेन्टरले कम गर्ने भएको छ । प्रविधिले यो समस्यामा पुलको भुमिका खेल्ने भएको छ ।
हाम्रो पात्रो इंक का फाउन्डररसिइओ शंकर उप्रेतीले यो लर्निङ सेन्टरले नेपालको शिक्षामा सकारात्मक परिवर्तन गर्दै आममानिसको पहुँचमा पुर्‍र्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । साथै उप्रेतीले यस लर्निङ सेन्टरलाई समय अनुकूल परिमार्जन गर्दै लैजाने र सबै विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रविधिका माध्यमबाट उपलब्ध गराउन कदम चाल्दै जाने बताए ।
असार १५ बुधबार एक समारोहका बीच हाम्रो पात्रोका सिइओ शंकर उप्रेती र डियरवाक सिफल स्कुलका अध्यक्ष हितेश कार्कीको बीचमा सहकार्यको लागि एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर । उक्त कार्यक्रममा हितेश कार्कीले भने( “हाम्रो पात्रोसँगको सहकार्यमा फ्लिप्ड क्लासहरू अझ फराकिलो विद्यार्थी समुदायसमक्ष पुर्‍याउन पाउँदा उत्साहित छु। हाम्रा कक्षाहरू धेरै विद्यार्थीहरूमाझ लोकप्रिय रहेकाछन् र हाम्रो पात्रोमा शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध हुँदा अझ धेरै विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने आश लिएको छु र हाम्रो पात्रो उक्त कार्यको लागि सर्वोत्तम माध्यम हुनेछ।”
यस लर्निङ सेन्टरका माध्यमबाट विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरूले सजिलै आफ्ना शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउन सक्छन् । हाललाई डियरवाक सिफल स्कुलका लेक्चरहरू सबै विद्यार्थीहरूले निःशुल्क अध्ययन गर्न सक्छन् । कक्षा चार देखि एघार कक्षा सम्मका विभिन्न विषयका शैक्षिक भिडियोहरू उपलब्ध रहेका छन् । बाँकी आवश्यक लेक्चरहरू, सम्बन्धित विषयका प्रश्न, क्विज पनि आगामी दिनमा थपिँदै जानेछन्। हाम्रो लर्निङ सेन्टर सम्पूर्ण विद्यार्थिहरूका लागि बहुउपयोगी हुनेछ।
हाम्रो पात्रो एपले प्रवासी नेपालीहरूलाई मातृभूमिसँग र आफ्नै देशभित्र फरक फरक स्थानमा बस्ने नेपालीहरूलाई आफ्नो परिवारसँग र सम्पूर्ण नेपालीलाई एकआपसमा नेपाली संस्कृति र परम्पाराको माध्यमबाट सन् २०१० देखि जोड्दै आएको छ । साथै समाचार, रेडियो, ज्योतिष, रेमिट्यान्स, इकमर्स, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा जस्ता सेवाहरू समयअनुकूल रूपमा थप्दै आएको छ।
सन् २०१६ मा स्थापना भएको डियरवाक सिफल स्कुल विद्यार्थीहरूलाई भाषा, गणीत र विज्ञान विषयमा सुदृढ शैक्षिक ज्ञान संगाल्दै वैश्विक नागरिकको रूपमा अघि बढ्न सहायता पुर्‍याउन प्रतिवद्ध छ। डियरवाक सिफल स्कुल हरेक विद्यार्थीको प्रतिभाको विकास गर्दै उनीहरूका क्षमता पहिचान गर्न सघाउने कुरामा दृढ छ ।
प्रयोगकर्ताले हाम्रोपात्रोको यो सेवा प्रयोग गर्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ क्लिक गरी गुगल प्ले स्टोरमा गएर तथा आइओएस एप स्टोरमा यहाँ गएर हाम्रोपात्रोको एप डाउनलोड अथवा अपडेट गर्नुपर्नेछ ।
‘बैंक डुबाएर मुलुकलाई असफल बनाउने खेल’
Ven, 01/07/2022 - 3:01am
नेपाल आयल निगमसँग ऋण तिर्ने हैसियत नदेखेर सरकारले उसले मागेको तीन अर्ब नदिने मात्र जानकारी गराएन, केन्द्रीय कार्यालयलगायतको सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन सुझाव दियो ।
‘यो सब नेपाललाई असफल मुलुक बनाउने घातक खेल हो, आयल निगमले ऋण तिर्न सक्दैन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै वाणिज्य बैंकबाट ऋण लिन सरकारले सुझाव दिएको छ, एउटा बैंक टाट उल्ट्यो भने त्यसको असर चक्र प्रणालीले अघि बढ्छ, मुलुक नै असफल हुन्छ’, नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो– ‘हामी श्रीलंकाको पथमा अघि बढेको प्रस्ट देखियो ।’
‘करिब १० वर्षअघि बाह्य मुलुकको सन्दर्भ हो, कुनै कारणले एउटा बैंक धराशायी भएपछि अन्य बैंकमा पनि त्यो रोग स¥यो, बैंकमा रकम राख्न असुरक्षित छ भनेपछि सबै ग्राहक एकसाथ पैसा निकाल्न बैंक गए भने मुलुक नै असफल बन्दैन ?’ डा. दीक्षितको प्रश्न थियो– म त अर्थविद् होइन, तर आयल निगमको यस सन्दर्भलाई लिएर अर्थविद्हरूको परामर्शमा सरकारले ठोस निर्णय लिनुपर्ने होइन ?
नागरिक समाजका अगुवा डा. दीक्षितले नेपाल समाचारपत्रलाई भन्नुभयो, ‘सरकारको नियत ठीक देखिएन, २२ अर्ब ऋणमा डुबेको आयल निगमलाई जग्गा–जमिन घितो राखेर वाणिज्य बैंकबाट ३ अर्ब ऋण लिएर काम चलाऊ भन्नु बेइमानी हो ।’श्रीलंकामा आज इन्धन छैन, अत्यावश्यक केही क्षेत्रका गाडी मात्र गुडेका छन्, सबैका गाडी थन्किएका छन् । सरकारले इन्धनमा लिने कर छुट गर्ने गरी आम नागरिकको दबाबमा इन्धनको मूल्य घटायो तर छुटको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छैन । यस व्यवहारका कारण सरकार आयल निगम निजी व्यापारीका हातमा सुम्पन चाहन्छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार अर्बौंको आर्थिक चलखेल गरेर सरकारले नेपाल आयल निगमलाई व्यापारीको हातमा दिने तयारी गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
पौडेलले नेपाल आयल निगम व्यापारीको हातमा दिएर अर्बौं कमाएर राजा बन्ने ध्यानमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू लागेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । ‘यस्ता चलखेलको पछाडि करोड होइन, अर्ब कमाएपछि त्यस्तो नेतालाई कसले छुन सक्छ ? त्यो आजीवन राजा हुने भइहाल्यो’ –उहाँले भन्नुभयो ।‘जब तपाईंले व्यापारीको हातमा दिनुहुन्छ अनि हाहाकार शुरू हुन्छ । व्यापारीले त नाफा हेर्छ नै’ पौडेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई समयमै सजग हुन सुझाव पनि दिनुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार नेपाल आयल निगमलाई एक पत्र लेखी बबरमहलस्थित मुख्यालय समेतको सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ऋण झिकी काम चलाऊ भनेर सल्लाह दिएको हो । सरकारले तेलमा कर छुट गर्ने भनेर तेलको मूल्य घटाएपछि निगमको घाटा चुलिएको छ ।निगमका प्रवक्ता विनीतमणि उपाध्यायले तीन महिनाअघि सरकारसँग ३ अर्ब ऋण माग्दै लेखेको पत्रको जवाफमा अर्थ मन्त्रालयले यस्तो सुझाव दिएको बताउनुभयो । तर यस सुझावका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले भने आफूलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो । उता उपाध्याय भने, ‘तीन अर्ब प्राप्त भए पनि एक छेऊ पुग्ने होइन’ भन्नुहुन्छ ।
हालै घटाइएको मूल्यभन्दा अघिसम्म नेपाल आयल निगम मासिक करिब ५ अर्ब नोक्सानमा थियो । असार मसान्तसम्म नोक्सानको अंक ५५ अर्ब पुग्ने बताइएको थियो । गत असार ११ गते मात्र इन्धनमा सरकारी कर छुट गर्ने गरी मूल्य घटाएको हो ।पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको प्रतिलिटर १० रुपियाँ पूर्वाधार विकास कर छुट गर्दा सरकारको मासिक आय दुई अर्ब रुपियाँले घट्छ । तर, सरकारले घोषणा गरिसकेको कर छुट गर्ने निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म आयल निगम भुक्तानीको जिम्मेवारीबाट मुक्त नहुने कानुनी व्यवस्था छ ।
असार १७ गते शुक्रबार, यस्तो छ आजको राशिफल
Ven, 01/07/2022 - 2:39am
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि) आज नयाँ कार्य, रोजगार वा नयाँ कामको अवसर मिल्नेछ । आफन्तको प्रगतिमा मन रमाउनेछ । शेयर बजारको लगानीले पनि राम्रै हुनेछ । राशिफल जे जस्तो भएपनि तपाईंको दिन शुभ रहोस् । -हाम्रो पात्रो
Gio, 30/06/2022 - 4:04pm
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइराला पक्षको बैठक भोलि पुन: बस्ने भएको छ ।
बिहीबार राजधानीको बत्तिसपुतलीस्थित अनुपम फुडल्याण्डमा बसेको कोइरा समूहको बैठक शुक्रबार दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको हो ।
आजको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई विधानसम्मत चलाउन नसकेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
१४ औँ महाधिवेशनपछि पनि पार्टी विधान र विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै बैठकमा नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
नेताहरूले सभापति देउवाले पार्टीभन्दा सत्तालाई मात्रै केन्द्रमा राखेर काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
देउवाले स्थानीय चुनाव सकिएको लामो समय भइसक्दा पनि केन्द्रीय समिति बैठक नराखेको, भ्रातृ संस्थामा आफूखुसी नियुक्ति गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
Gio, 30/06/2022 - 3:54pm
भक्तपुर । भक्तपुर नगरपालिकाकाको आयोजनामा विहीबारदेखि भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय राष्ट्रपति कप खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भएको छ ।
प्रतियोगिताको उद्घाटन नगर प्रमुख सुनिल प्रजापतिले गरे । कार्यक्रममा उनले भक्तपुरको खानेपानीको मुख्य आधार नगकोट खानेपानी मुहानमा खेल मैदानको नाममा पानीको श्रोतमाथि गरेको दोहनप्रति दुःख व्यक्त गरे । नगरकोटको भंगेरीडाँंडामा पानीको श्रोत सुक्ने गरी खेल मैदान बनाएको भन्दै उनले त्यसको विरोध जनाए ।
प्रतियोगिता असार १६, १७ र १८ गरी तीनदिनसम्म हुनेछ । प्रतियोगितामा कबड्डी, एथ्लेटिक्स, भलिबल र कराँते गरी चारवटा खेल सञ्चालन हुने आयोजनक समितिले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख रजनी जोशीले खेलकुदका कारण समाजमा सुरक्षित भएर बाँच्ने आधार तय हुने बताउँदै देशको सार्वभौमिकता रक्षाको निम्ति खेलाडीहरु अग्रसर भएर लाग्नुपर्ने बताइन् ।
भक्तपुर जिल्ला खेलकुद समितिका अध्यक्ष किरण थापाले विद्यालय जीवनबाट खेलकुदमा अग्रसर भई देशको निम्ति योगदान गर्नुपर्ने बताउँदै यस किसिमको प्रतियोगिताले भक्तपुरमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादनमा टेवा पु¥याउने बताए ।
भक्तपुर नपा वडा नं. १ का वडाध्यक्ष श्यामकृष्ण खत्रीको सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य सुनिता अवाल र भनपा वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष उपेन्द्र सुवालले खेल क्षेत्रबारे चर्चा गरे ।
Gio, 30/06/2022 - 3:46pm
काठमाडौं । वल्ड नेवाः अर्गनाईजेशन, नेपा च्याप्टरको आयोजनामा नेवाः पहिचानका विविध आयाम विषयक दुई दिने राष्ट्रिय गोष्ठी भोलि शुक्रबार राजधानीमा शुरु हुने भएको छ।
नेपाल भाषा र संस्कृतिसहित समसामयिक विषयमा जनमत बनाउने, विचार विमर्श शुरुआत गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको नेपाल च्याप्टरका अध्यक्ष सुरेन्द्रभक्त श्रेष्ठले विहीबार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बताए ।
सो गोष्ठीको पहिलो दिन डा.मिलन शाक्यले नेवाः पहिचानका विविध आयाम विषयमा प्रस्तुत गर्नेछन् । नेवाः शिक्षा र सञ्चार विषयको पहिलो सत्रमा प्रा.डा.चुन्दा बज्राचार्यले नेपालको शिक्षाप्रणालीमा नेपालभाषा, वरिष्ठ पत्रकार सुरेशकिरण मानन्धरले नेपाल भाषाको पत्रकारिताले समात्नुपर्ने बाटो, र लिपि अध्येयता शरद कसाःले नेपाल लिपिको बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । पहिलो सत्रको अध्यक्षता प्राडा ओमकारेश्वर श्रेष्ठले गर्नेछन् ।
दोस्रो सत्रमा किरण के रञ्जितले विश्वमा नेवाः, प्रेमराज शिल्पकारले पहिचानको लागि भएको आन्दोलन र श्याम मानन्धरले नेपाल संवत् र शंखधर साख्वाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुनेछ ।दोस्रो सत्रको अध्यक्षतामा डा। विजयप्रकाश सैंजुले गर्नेछन् ।
शनिबार हुने तेस्रोसत्रमा जितेन्द्र बज्राचार्यले नेवाः संस्कृति गणेश, शोभा श्रेष्ठले हाकु पटासी र वरिष्ठ पत्रकार पुष्करभक्त माथेमाले नेवाः पहिचानको अतिक्रमण विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।
यस सत्रको अध्यक्षता इतिहासकार पुरुषोत्तमलोचन श्रेष्ठले गर्नेछन् । चोथों सत्रमा राजनलाल जोशीको अध्यक्षतामा नेवाः अमूर्त संस्कृति अन्तर्गत पत्रकार रत्न मनले येँया पून्हि, विराजकाजी राजोपाध्यायले अण्डा सगुन र त्रिरत्न मानन्धरले दाफा बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।
सोही दिन लोककवि राजभाई जकःमीले संकलन गरेको नेवाः पुर्खा विषयक सचित्र पुस्तकको लोकापर्ण गर्ने पनि पत्रकार भेटघाटमा बताइयो ।
गोष्ठीमा उठान भएको विषय र त्यस उप्रको टिप्पणी, बहस र प्रश्नोत्तरको आधारमा घोषणापत्र जारी गर्ने पनि नेपाल च्याप्टरका उपाध्यक्ष रमेशमान मुनिकारले बताए ।